नेपालको संविधान २०७२ : उपलब्धि र कमीकमजोरी – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
नेपालको संविधान २०७२ : उपलब्धि र कमीकमजोरी
२०७६ आश्विन ३, शुक्रबार ०४:४७ गते
नेपालमा नेपालीले आफ्नै बलबुताले आफ्नै प्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने, आफैँले संविधान जारी गर्ने र आफ्ना लागि आफैँले नियम–कानुन बनाई शासन गर्ने २००७ सालदेखिको चाहना परिपूर्ति गर्ने अवसर विभिन्न कारणहरुले गर्दा नपाइरहेको अवस्था लामो समयसम्म जारी रह्यो । यसका लागि इतिहास नढाँटी लेख्नुपर्ने भएकोले जनताको चाहना परिपूर्ति गर्ने प्रक्रियामा प्रमुख अवरोधक भनेकै नेपालको राणा शासनपछिको राजसंस्था थियो । जब नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड भई राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो, त्यसपछि मात्र नेपालमा राजसंस्थाप्रति नेपालीको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्यो र नेपालीको सपना पनि सार्थक भयो भन्न सकिन्छ । किनकि, नेपालीहरुले नेपालको राजसंस्थालाई भगवान् विष्णुको अवतारको रुपमा स्वीकारेको पाइन्छ, जुन मान्यता यदाकदा अहिले पनि नेपालीको मन–मस्तिष्कमा रहेको भेटाइन्छ । नेपाली जनता जसले राजालाई विष्णु भगवान्को अवतार माने र मन–मस्तिष्कमा सजाएर राखे ती राजा, राजसंस्था र राजपरिवारको दृष्टिकोणचाहिँ नेपाली जनतामैत्री कहिल्यै हुन सकेन । राजाले नेपाली जनतालाई जहिल्यै पनि रैती नै ठाने, जब कि सच्चा राजभक्त तथा विष्णुभक्तको दर्जा कहिल्यै दिन जानेनन् । फलस्वरुप एकोहोरो विष्णुभक्तरुपी नेपाली जनताको मन पनि परिवर्तन भयो र एकदिन राजसंस्था नै ढल्न बाध्य भएको हो ।
नेपाली जनतालाई यस्तो बाध्य बनाउने काम राजसंस्थाबाटै भएको हो र राजसंस्था अन्त्य हुनुमा पनि राजसंस्थाकै हात रहेको कुरा कसैबाट छिप्न सक्दैन । नेपालमा राजपरिवारले धेरै लामो समय राज ग¥यो । त्यही अवधिमा संसारले निकै प्रगति गरिसकेको थियो, संसार वैज्ञानिक युगमा प्रवेश गरिसकेको थियो, चमत्कार भइरहेको थियो । तर, नेपालमा भने जनताहरु रैतीका रुपमा नै दिन बिताउन बाध्य थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रविधि, सडक, सञ्चार, खानेपानी, खाद्यान्नजस्ता आम आधारभूत कुराहरुको सामान्य उपभोग गर्नुबाहेक प्रविधिमा आधुनिकताका कुरा सुन्नसमेत पाएका थिएनन् नेपाली जनताले । त्यसैको फल हो, अहिलेसम्म पनि नेपाल र नेपाली जनताको विकास हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म पनि चरम गरिबी र आर्थिक संकटका कारण लाखौँ नेपालीहरु विदेशिनु परिरहेको छ । संसारका विकसित देशहरुसँग तुलना गर्ने हो भने नेपाल अझै ५०औँ वर्ष पछाडि नै छ ।
नेपालमा यस्तो विकराल स्थिति आखिर किन आयो त ? जब कि, उत्तर र दक्षिणका देशहरुले संसारलाई नै हल्लाउने क्षमता राख्न सक्छन् । तर, ती दुवै देशको बीचमा रहेको यो सानो मुलुकमा किन यस्तो भयावह अवस्था रहेको होला ? हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ कि नेपालमा धेरै वर्ष राज गरेका र शासन चलाएका राजा तथा राणाहरुले नै नेपाली जनताको टाउको उठाउन कहिल्यै दिएनन् । जनता बाठा भए भने आफ्नो सत्ता टिक्दैन भन्ने मनसायले नै राजसंस्थाले सदा नेपालीलाई गुमराहमा राख्ने प्रयास ग¥यो । कोही टाठाबाठा नेपालीलाई विभिन्न पदहरु दिएर थामथुम पार्ने र अन्य जनतालाई भने केवल राजसंस्थाकै स्तुति गाउन सिकाइयो । पाठ्यक्रममै राजसंस्थाका भन्दा अन्य कुनै विषयवस्तु नराख्नु, राजभक्ति नै आदर्श हो भन्ने सिकाउनु, अन्य देशका कुनै पनि राजनीतिक र सामाजिक कुराहरु नराखिनु, इतिहासमा केवल राजसंस्थाकै वकालत गरिरहनु, तर समयानुकूलको सच्चा इतिहासलाई गायब गर्नु यी सबै राजसंस्थाका कर्तुतहरु हुन् । नेपाली जनता आखिर यस्तो एकोहोरो प्रवृत्तिका हुनु र राजाको विरूद्धमा त कुनै कुरा काटे पनि पाप लाग्छ भनी मन–मस्तिष्कमा राजसंस्था नै सजाउनु नेपाली जनताका नियति भइरहे र घटनाक्रमले अहिले पनि त्यस्तो मनस्थिति देखिँदैछ । यस्तो अवस्था त्यतिबेलासम्म कायम रह्यो जतिबेलासम्म राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश हुने गरी घटना घट्यो । त्यसपछिका दिनहरुमा मात्र जनताले आफूले पत्याएको विष्णु अवतारको विनाश भयो । यही घटनापछि मात्र नेपाली जनताको मन–मनमा नयाँ राजाप्रति विश्वास जाग्न सकेन र थोरै आशंका रहिरह्यो ।
माओवादीको जनयुद्धको जग र एजेन्डा अनि जनतामा छाएको आशंकाको फलस्वरुप सुरू भयो बल्ल नेपाली जनताको आशा लाग्ने खालको आन्दोलन । केही दिनमै बिनारक्तपात राजसंस्थाको समेत अन्त्य भयो र बल्ल नेपाली जनताहरु इतिहासमै बने सार्वभौमसम्पन्न गणतन्त्रको युगका नेपाली जनता, भलै यसमा सबैले अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन् । त्यसपछि नेपालमा न त विष्णुका अवतारका प्रत्यक्ष क्रियाकलाप देखा परे, न त नेपालीलाई रनभुल्लमा पार्ने काम राजा–रजौटाले गर्ने अवसर पाए । अब जनताहरुमा निकै राजनीतिक चेतनाको विकास हुँदै गयो र सारा संसारलाई हेर्ने अवसर पनि पाए । तर, यतिबेलासम्म आइपुग्दा नेपालीहरु संसारका अगाडि उभिँदा करिब ५० वर्ष पछि परिसकेको अवस्था छ । अब यतिबेला नेपालीहरुमा होस आएको छ र सबै सचेत हुन थालिसकेका छन् ।
२. नेपालको संविधान २०७२ को इतिहास
दुर्भाग्य, नेपालमा जनताले दुःख गरी ल्याएको गणतन्त्र र जनतामा जागेको आशा जुन थियो त्यो हालसम्म संस्थागत हुन सकेको छैन भन्न सकिन्छ । राजतन्त्रपछि जनताको आशाको केन्द्रबिन्दु बनेका नेपालका अनेक दलका राजनेताहरुले फेरि छोटे राजाको भूमिका खेल्न थाले र जनतालाई पुनः पेण्डुलम बनाउन थाले । दलहरु सम्मिलित सरकार र संविधानसभाको गठन भएपछि पनि जनताले ल्याएको लोकतन्त्रलाई नेताहरुले संक्रमणकाल भन्दै सत्तामा जाने भ¥याङ बनाउन थाले । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण पहिलो संविधानसभाको असफलता नै हो । राजसंस्थाको अन्त्य गर्नु हाम्रो भूल त थिएन वा हामीले हाम्रा अभिभावक नै गुमाइयो कि त भन्ने भ्रम जनतामा पुनः विकसित हुने अवस्था पनि आयो र जनता रनभुल्लमा पर्न थाले । लगत्तै विदेशी चलखेल पनि सुरू हुन थाल्यो, जुन कुरा नेपालका राजनेताले सत्ता टिकाउने दाउमा शरणागत हुने गरेको पनि नेपाली जनताले पत्तो पाए ।
आखिर विभिन्न विघ्न–बाधाहरुका बीचबाटै नेपालको संविधान २०७२ दोस्रो संविधानसभाबाट जारी भयो । तर, नेपालीहरुले आफूले चाहेको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको अवसर र उपलब्धि संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने खालको खुसी मनाउन पनि राम्ररी पाएनन् । कारण, संविधान जारी गर्दा विदेशी शक्तिको मतलब नराखिनु नै थियो । जुन कुरा तराई मधेसका केही दलहरुले बुझ्न सकेनन् वा जनतालाई बुझाउन सकेनन्, बरू जनतालाई नै हतियार बनाई संविधानको विरूद्धमा उतारियो र पुनः लामो मधेस आन्दोलन भयो । यसबेलामा अनावश्यक धेरै सहिद हुन पुगे । नेपाल र नेपालीमा यसरी निरन्तर संक्रमणकाल बढाउने प्रयासहरु आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट भइराख्यो । यही बीचमा कसैले नसोचेको आर्थिक तथा भौतिक नाकाबन्दीको समेत नेपालीहरुले सामना गर्नुप¥यो । जुन दुःखद क्षण नेपाली जनताहरुको मन–मस्तिष्कमा सदा ताजा रहिरहने छ र यस्ता घटनाहरु फेरि दोहोरिन सक्नेतर्फ पनि सचेत हुने अवसर प्राप्त भएको छ । नाकाबन्दीलाई समेत सहजै पार लगाउने हिम्मत नेपाली जनताले देखाएपछि विदेशी शक्तिको पनि केही चलेन । यस्ता खालका घटना र परिघटनाहरुका बीच नेपाली जनताले क्रमशः पार पाउँदै गए र घरको समस्या घरबाटै हल गर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ, नकि अन्य कुनै पनि बाहिरी शक्तिको दबाबबाट भन्ने कुराको सिद्धान्त स्थापित गर्नसमेत नेपाली जनता सचेत भएर लागेका छन् । तथापि, पुराना सोच हाबी भएका पुराना नेताहरुले अझै जनताको अभिमतविपरीतका क्रियाकलापहरु पनि देखाउँदै गइरहेको आभास मिलेको छ, जसलाई पनि जनताले बिस्तारै पाखा लगाउँदै जाने निश्चित छ ।
३. संविधानको कार्यान्वयन
अनेक खालका प्रताडना सहँदै नेपाली जनताहरुले बनाएको र जारी गरेको नेपालको संविधान २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्ने अवसर बल्ल पाउँदैछन् । तर, इतिहासमा यही बीचमा नेताहरुले धेरै खालका हर्कतहरु देखाउने काम गरेका थिए । सरकार परिवर्तनका खेलहरु खेल्ने, पार्टी फुटाउने, संविधान संशोधन गर्ने वा नगर्ने नाममा द्वन्द्व निम्त्याउने, संक्रमणकालको नाममा इतिहास कायम गर्ने गरी संविधानविपरीत अनावश्यक जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने, पूर्वपदाधिकारीको नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गरिरहन पेन्सन तथा सेवासुविधाको प्रस्ताव गर्ने, केही समय मात्र पदावधि बाँकी रहेका सांसद्हरुलाई करोडौँ रूपैयाँ विकास खर्चको नाममा वितरण गर्ने, न्यायालयमाथि कार्यपालिकाले अनावश्यक हस्तक्षेप गरी न्याय क्षेत्र तहसनहस पार्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षण गर्नेजस्ता आदि कुकृत्यहरु गरिरहेका थिए । तर, यस्ता कुराहरुको अलावा केही समयअघि सम्पन्न भएका विभिन्न तहका चुनाव र दुई तिहाइ प्राप्त नेकपाको सरकारमार्फत जनताले अब संविधानको स्वाद चाख्ने व्यग्र प्रतीक्षामा छन् ।
यसपछि पनि विभिन्न विघ्न–बाधाहरु आउने नै छन्, जसको पनि सशक्त प्रतिकार गर्ने हिम्मत नेपाली जनतामा यथावत् रहेको छ । सचेत जनताका अगाडि अब कसैको केही नचल्ने कुरा देखिन थालेको छ, जुन नेपाल र नेपाली जनताको लागि राम्रो कुरा र अवसर पनि हो । अहिले नेकपाको करिब दुई तिहाइको सरकार छ र संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पनि उसैको हो । आवश्यक नीति–नियम बनाउने, कानुन बनाउने, संविधानले चाहेको कुरा लागू गर्न दत्तचित्त रहने जिम्मेवारी नेकपाको काँधमा आएको छ । यसका लागि विभिन्न पक्षहरुबाट अवरोध पनि भइरहेको अवस्था छ, जसको कुशल व्यवस्थापन गर्नु पनि नेकपाकै जिम्मेवारी हो । विभिन्न खालका घटना तथा परिघटनाहरुले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या पैदा गरिरहेको अवस्था छ । यसैगरी, संविधान मन नपराउने त¤वहरुले निरन्तर यसको असफलताका लागि प्रयास गरिरहेका पनि छन् । यी सबै अवरोध छल्दै कुशलतापूर्वक संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने नेपाली जनतामा गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
४. संविधान दिवसबारे
२०७६ साल असोज ३ गतेसम्म आइपुग्दा नेपालीले चौँथो संविधान दिवस मनाउन पाएका छन्, जुन दिवसमा पनि त्यति रौनकताचाहिँ देखिएको छैन । कारण के त भने संविधान ९० प्रतिशत सभासद्को दस्तखतबाट जारी गरिएको भनिएता पनि सर्वस्वीकार्यचाहिँ अझै बन्न सकेको छैन । अझै पनि संविधानमा केही मतभिन्नताहरु रहेका छन् । यस्ता मतभिन्नताहरुको समाधान सबै पक्षहरु बसेर छलफल गरेर आवश्यक देखिएका कुराहरुमा संशोधनवा थपघट गरी समयमै टुंग्याउनु जरूरी थियो, तर त्यस्तो अग्रसर सरकारले देखाउन सकेको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण संविधानप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका समाजवादी वा मधेसवादी पार्टीले संविधान दिवसमा रमाइलो नगर्ने र नमनाउने घोषणा गर्नु हो । सरकारले निकै भव्यताका साथ संविधान दिवस मनाउने भनेर उर्दी जारी गरी विभिन्न तयारीहरु समेत भइरहेको अवस्था छ, तर हुनुपर्ने उमंग त्यतिसाह्रो देखिएको छैन । यस्तो अवस्थाबाट के बुझ्न सकिन्छ भने जुन भव्यताका साथ दिवस मनाउनुपर्ने हो त्यो भव्यता संविधान सर्वस्वीकार्य भई कार्यान्वयनमा गएपछि र संविधानमा लेखिएका कुराहरु अक्षरशः पालना भएपछि मात्र जनताले त्यही दिनदेखि नै उल्लासमयरुपले संविधान दिवस मनाउने छन् । आशा छ, त्यस्तो दिन पनि जनताले निकट भविष्यमै देख्न पाउने नै छन् ।
(लेखक मध्यविन्दु बहुमुखी क्याम्पस, कावासोती, नवलपुरका प्राध्यापक हुन् ।)